Kedu esi esi na backlinks dị mkpa site na saịtị TOP PR na Google?
Backlinks dị nnọọ ịrịba ama maka ọwa weebụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa nke obodo ma ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa na-ere ahịa online. Ị nwere ike nweta njikọ na mpụga site na ikwu na weebụsaịtị ndị ọzọ ma ọ bụ jiri ozi biputere ma ọ bụ nyefee isiokwu maka ibe akwụkwọ na ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'Ịntanet.E nwere ụzọ ndị bụ isi nke njikọ na-arụpụta. Otú ọ dị, enwere ọtụtụ ụzọ ọzọ ndị ọkachamara ga-esi wuo njikọ na weebụ.
Gịnị mere i ji choro iji saịtị TOP PR maka backlinks?
Iji nweta PageRank dị elu ma mee ka ọnọdụ gị na saịtị dị elu, ịkwesịrị ịwube njikọ gị na weebụsaịtị TOP PR.Onye nwe ohia weebụsaịtị ga-achọ inweta njikọ sitere na ebe nrụọrụ weebụ PR dị elu, ọ bụ ya mere ị ga-esi na-eche ihe isi ike ihu na ịnweta saịtị ndị a. Ọzọkwa, ọtụtụ mgbe, ụdị ebe nrụọrụ weebụ a na-enye ohere ka ọbụbụ njikọ njikọ na ibe ha. Njikọ Nofollow agaghị eweta ihe njikọ njikọ ọ bụla na saịtị gị ma hà na-etinye na weebụsaịtị ma ọ bụ spammy. Ọ bụ ya mere ihe ị chọrọ bụ njikọ dofollow nke nwere ike ịwelite ọnọdụ saịtị gị ma nye aka itinye mgbalị nyocha ọchụchọ gị.
Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ TOP PR ebe ebe backlinks dofollow dị. Ka anyị tụlee ụfọdụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ ndị a.
Google na-eduzi netwọk mgbasa ozi ọha na eze nke a na-etinye na TOP nke PageRank na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akara kasị elu
. N'elu ikpo okwu a, ị nwere ike ịme ma backolks abụọ na ndị dofollow.
Nke mbụ, ịkwesịrị ịbanye na akaụntụ Google gị ma nyochaa ya. Jide n'aka na i nwere igbe igbe na Gmail. Gaa na peeji profaịlụ gị wee pịa "Ihe" ngalaba. Mgbe akwụkwọ mpịakọta ahụ gaa na "Njikọ" ma pịa "Dezie" nhọrọ. Ịnwere ike ịgbakwunye njikọ gị na mpaghara a, ha ga-aghọ dofollow na-akpaghị aka.
Nkọwa mgbasa ozi a na-emekarị n'oge anyị. Kwa ụbọchị ọtụtụ nde ndị mmadụ na-emeghe ya maka ebumnuche na ntụrụndụ. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ihe ezi uche dị na ya iji iji weebụ PR9 a maka abamuru gị. N'ebe a, ị nwekwara ike iwulite ma mee njikọ abụọ ma wedoo njikọ.
Dịka YouTube bụ ihe ntanetị mgbasa ozi na oke ọnụahịa nke ozi ederede, ịnwere ike ịgbakwunye blog ma ọ bụ ntanetịime weebụ na mpaghara "Ihe" ma ọ bụ "Nkọwapụta". A na-ele njikọ ndị a anya dị ka oche na-eme ka ị ghara ịbịaru ihe ọṅụṅụ na-ejikọta aka na saịtị gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị tinye njikọ gị na ngalaba "Associated Website", ị nwere ohere niile iji nweta backlinks dofollow.
Dịka enwere ọtụtụ ndị na-ede blọgụ vidio bụ ndị na-etinye vidiyo ha na YouTube n'otu oge, ị nwere ike ịmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta na ha. Ihe niile ị chọrọ bụ ịchọta onye na-ede blọgụ nke na-eme vidio ma ọ bụ isiokwu metụtara gị ma jụọ ya maka nkwado. O yikarịrị ka ị ga-enweta nzaghachi dị mma dị ka ndị na-ede blọgụ kachasị na-achọ nkwado ego.
Iji nweta backlinks dofollow na YouTube, ị ga-enyocha akaụntụ gị site na iji njikọ ma nyefee saịtị gị na Google Webmasters. Mgbe ahụ ịkwesịrị ịbanye na akaụntụ YouTube gị ma họrọ ọrụ "Ntọala Ọwa" ma mesịa kpatụ "lee Njirimara Ndị Ọzọ. "N'okpuru ngalaba dị elu, ị ga-enwe ike ịgbakwunye saịtị gị na ngalaba" weebụsaịtị " Source .